Hebei Jiake zokushisela Izinsiza kusebenza Co., Ltd.
Gxila ocingweni anezikhala imishini yokukhiqiza
Nezimo imishini izixazululo Advanced weld ubuchwepheshe embonini
JIAKE Imishini-Kuhle sha umkhiqizi wocingo imishini eChina
Iminyaka engama-20 yesipiliyoni esiqhubekayo sokuthuthuka embonini yomakhi wemishini yocingo.
Amandla wokwenza ngokwezifiso wesidingo sakho somkhiqizo othize.
I-Hebei Jiake Welding Equipment Co., Ltd. yasungulwa ngonyaka we-1999 futhi itholakala ezweni le-Anping, esifundazweni sase-Hebei, e-China. Kungumhlinzeki wesixazululo semishini yokwenziwa kobuchwepheshe besisombululo sobuchwepheshe futhi uzibophezele ekuhlinzekeni izixazululo zokwenza izintambo zabasebenzisi bomhlaba jikelele.
Ngemva kweminyaka engaphezu kwengu-20 yentuthuko eqhubekayo kanye emisha, JIAKE imishini isibe nomkhiqizi China ehamba phambili imishini wire anezikhala. Emkhakheni ephezulu wire wire anezikhala yokukhiqiza, Jiake imishini isungule ehamba phambili Welding ubuchwepheshe yayo futhi professional. Emkhakheni wocingo lokweluka imishini, futhi sisungule izinqubo eziphelele zobuchwepheshe kanye namathimba wenkonzo yobungcweti ngokubambisana nabanye abakhiqizi.
I-JIAKE WIRE MESH MACHINERY
Gxila ekunikezeni izixazululo zemishini yokushisela i-mesh nemishini yokweluka i-mesh
- Gxila ekunikezeni izixazululo zemishini yokushisela i-mesh kanye nemishini yokweluka i-mesh
Wire Mesh Ukwenza Machine, Chain Xhumanisa Uthango Machine, Hexagonal Wire Netting Machine, Wire Mesh Welding Machine, Ukuqinisa Wire Mesh Welding Machine, Cage Mesh Welding Machine, Welding Machine Mesh Welding Machine, Ngocingo Oluhlabayo Machine, Expanded Metal Mesh Machine, futhi Wire Umdwebo Machine, njll
Imikhiqizo nobuchwepheshe bathole amalungelo obunikazi kazwelonke, futhi banesitifiketi se-CE, isitifiketi se-FTA, iFomu E, ukuvunywa kweFomu F. Iphasipoti yomshini, imvume yakho yamasiko ngeke ibe nankinga.
KUSUKELA UNYAKA KA-1999
Ama-R & D angama-50
IZIMakethe ZOKUDAYISWA KWE-GLOBAL
Ezimakethe zaphesheya kwezilwandle, iJIAKE Machinery ithengise amazwe angaphezu kwezi-100 nezifunda emhlabeni jikelele.